Download Subway Dash အက်ပ်ဂိမ်း
App Store Arcade Subway Dash
ဤဂိမ်းကို ဒေါင်းလုတ်ရယူရန်အတွက် မှတ်ပုံတင်ရန် သို့မဟုတ် လော့ဂ်အင်ဝင်ရန် လိုအပ်ပါသည်။
Subway Dash isaclassic endless runner withamultiplayer feature, compete against your friends in real time in this super exciting and fun game. The game consists of really cool graphics across multiple levels.
Subway Dash isaclassic endless runner withamultiplayer feature, compete against your friends in real time in this super exciting and fun game. The game consists of really cool graphics across multiple levels. In Subway Dash you need to try escape from the burly transit security guard. You'll need to dodge trains, buses, obstacles, and more and collect coins to unlock in-game power-ups in order to go as far as you can in this endless running game.
အက်ပ်အတွင်း ပါဝင်သော ဝယ်ယူမှုများ - Yes
Android 7.0 and above2GB RAM and above (for optimal performance) ARMv7 CPU with NEON support or Atom CPU OpenGL ES 2.0 or later
သင်၏ ဝယ်ယူမှု အောင်မြင်ပါသည်။
သင်၏ ဝယ်ယူမှု မအောင်မြင်ပါ။
သင်၏ ဝယ်ယူမှုကို ပယ်ဖျက်လိုက်သည်။
သင်၏ ဝယ်ယူမှုကို ဆိုင်းငံ့ထားသည်။
သင်၏ ကွန်ရက်ပံ့ပိုးသူထံမှ သင့်ထံပေးပို့မည့် အတည်ပြုရန် SMS စာတိုတစ်စောင်ကို စောင့်ဆိုင်းပေးပါ။
သင်၏ ဒေါင်းလုတ်ကို စတင်နေပါပြီ။